स्वास्थ्य समायोजनको समसामयिक बिषयमा यसो भन्छन मन्त्रालयका प्रबक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ ! – Public Health Concern(PHC)
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको समायोजनको काम लामो समयदेखि टुंगिन सकेको छैन। समायोजनको काम अगाडि बढेपनि विभिन्न समस्या उत्पन्न हुँदै आइरहेको छ। कर्मचारी समायोजनको अन्योलले गर्दा कर्मचारी पनि अन्योलमा परिरहेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यका कर्मचारीले समायोजनमा राखेका गुनासा सम्बोधन गरेको फाइल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। सामान्यबाट आएको सूची अनुसार समायोजनको काम कसरी अगाडि बढ्छ? कहिलेसम्म समायोजनको काम सकिन्छ? लगायतका विषयमा स्वास्थ्यखबरले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तामहेन्द्र श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ।
कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुरु भयो। त्यसपछि गुनासो आयो। ती गुनासोको सुनुवाईको काम भयो। त्यो सबै सकिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जेठ ३१ गते सफ्टवेयर र आज हार्डकपी आइसकेको छ। अब यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै कुराहरु हेरेर क्रमागत रुपमा कर्मचारीलाई समायोजनको पत्र पठाउने काम हुन्छ।
समायोजनका लागि हामीले प्राथमिकता तोकेका छौं। एकल महिला, अपांग, श्रीमान श्रीमति, मेडिकल बोर्डको सिफारिस लगायत गरेर प्राथमिकता तोकिएको छ। त्यही अनुसार कर्मचारीलाई हाल कार्यरत संस्थामा नै पत्र पठाउने काम हुन्छ। अहिले दिइरहेको सेवामा असर नपरोस भनेर नै हामीले कर्मचारीलाई कार्यरत स्थानमा नै पत्र पठाउन लागेका हौं। पत्र पठाइसकेकाहरुको सूची क्रमश वेभसाइटमा पनि प्रकाशित हुनेछ।
त्यसकारण कोही पनि कर्मचारी नआत्तिकन आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बसिरहनु होला। पत्र तपाईहरुकोमा नै आउँछ। यसमा पनि तपाईहरुको केही गुनासो छ भने अझै पनि हामी गुनासो सुन्छौं। गुनासो सुनाईका लागि अझै समय दिन्छौं। त्यसकारण यहाँ आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। साढे २७ हजार कर्मचारीमध्ये १९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको कुनै गुनासो छैन। ८ हजार कर्मचारीको केही गुनासो छ। गुनासो सम्बोधन पनि भएको छ।
फाजिलमा रहेका कर्मचारीको गुनासो छ। उहाँहरुलाई आफूलाई पायक पर्ने स्थना कहाँ हो? भनेर माग गरिएको छ। त्यही आधारमा समायोजन भएको भन्ने सामान्यबाट जानकारी आएको छ। आजसम्म फाजिलको पोका हामीले खोलेका छैन। अब त्यो पोका भोली खोल्छौं र काम अगाडि बढाउँछौं।
कर्मचारी समायोजनका सबै काम हामीले यो महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखेका छौं। बढीमा ३० गतेभित्र सम्पूर्ण कर्मचारीको काम सकाउने लक्ष्य हाम्रो छ। सन्दर्भ सामाग्री : स्वास्थ्य खबर
Tags: authorities speak in health sectorhealth infoMoHPpublic health updateSwaasthya Samaayojan
गर्मीमा खर्बुजा ! स्वास्थ्य लाई यति धेरै फाईदा !